कसरी उत्तम ब्लग पोष्टहरूले तपाईंलाई उत्तम प्रेमी बनाउँछ | Martech Zone
कसरी उत्तम ब्लग पोष्टहरूले तपाईंलाई उत्तम प्रेमी बनाउँदछ
बिहीबार, फेब्रुअरी 28, 2013 बुधबार, अक्टोबर 28, 2020 निखिल राज
ठीक छ, त्यो शीर्षक थोरै भ्रामक हुन सक्छ। तर यसले तपाईंको ध्यान प्राप्त गर्‍यो र तपाईंलाई पोष्ट गर्न क्लिक गर्‍यो, हैन र? यसलाई लिंकबाइट भनिन्छ। हामी सहायता बिना यस्तो तातो ब्लग पोस्ट शीर्षकको साथ आएका थिएनौं ... हामीले प्रयोग गर्‍यौं पोर्टेंटको सामग्री आइडिया जेनरेटर.
चतुर मान्छे मा पोरन्ट प्रकट भएको छ कसरी जेनरेटर को लागी विचार हुन आयो। यो एक राम्रो उपकरण हो कि पूंजीकरण गर्दछ लिंकबेटिंग प्रविधिहरू त्यो प्रयास गरियो र सत्य हो:
अहंकार हुक - जब व्यक्ति तपाईलाई कराउँछन् व्यक्तिले सामग्री साझेदारी गर्दछ।
आक्रमण हुक - आपत्तिजनक मा गएर, तपाईले चासो जगाउन सक्नुहुन्छ।
संसाधन हुक - एक महान स्रोत सधैं एक महान सामग्री विचार हो!
समाचार हुक - ट्रेन्डिंग शीर्षक अधिक क्लिक ड्राइव।
कन्ट्रास्ट हुक - बहस सिर्जना गर्नुहोस् र तपाइँ आफैंमा विपरित हुक पाउनुभयो।
हास्य हुक - तपाईं यो पोष्ट पढ्दै हुनुहुन्छ, हैन?
शीर्षक तपाईंको सामग्रीको लागि यति महत्त्वपूर्ण छन्। मलाई के यो उपकरणको बारे सबैभन्दा मनपर्दछ कि यो केवल अनियमित रूपमा शीर्षक पप अप गर्दैन, यसले शीर्षक किन लि link्कबाइटको रूपमा काम गर्दछ भनेर पनि वर्णन गर्दछ। यो प्रत्येक पटक उत्तम छैन, तर यो रमाईलो छ र यसको बारेमा यस पोष्ट लेख्न पर्याप्त विस्मयकारी सामग्री विचारहरूको साथ आउँदछ!
पोर्टेंटको नि: शुल्क सामग्री आइडिया जेनरेटर प्रयास गर्नुहोस्
टैग: सामग्री विचार जनरेटरविचार जेनरेटरलिङ्कबाइटलिंकबेटिंग प्रविधिहरूसहन
निखिल राजसँग एसईओ र डिजिटल मार्केटिंगमा ++ बर्षको अनुभव छ। उहाँसँग सिधा काम गर्नुभयो Douglas Karr उनीहरूको स्थानीय, राष्ट्रिय, र अन्तर्राष्ट्रिय खोज इञ्जिन अनुकूलनको साथ असंख्य क्षेत्रीय र राष्ट्रिय ग्राहकहरूको प्रबन्ध गर्न।
Socialite.js को साथ आलसी लोड सामाजिक बटनहरू